Talata, Novambra 29, 2011 Alahady Oktobra 4, 2015 Douglas Karr
Sehatra iray amin'ny varotra atiny izay tadiavinay hampitomboina dia ny fampiasana horonantsary. Nandinika ny fomba nampiasan'ny bilaogera hafa ny horonantsary aho saingy inoako fa somary snob aho… Te hanana zavatra tsara kokoa fotsiny aho. Mandehandeha miaraka amina fakantsary HD daholo isika ary mora ampiasaina ny fitaovana, koa maninona aho no miara-manorotoro lahateny am-bava mahatsikaiky ataoko amin'ny olona iray ary manosika azy ato amin'ity bilaogy ity fa niasa mafy isika mba hahazoana toerana avo haavon'ny kalitao?
Toa tsy ho ela dia ho mora kokoa ho an'ny mpampiasa ny iPhone ny raharaha, miaraka amin'ny famoahana beta voafetra an'ny Cinefy eny an-tsena. Ity misy mpametaveta vokatra iray karazana fanovana azo tanterahina… mamela anao hanova horonan-tsary, manampy effets, ary misafidy feon-kira tsy misy zon'ny mpamorona mihitsy aza.
Cinefy dia sehatra fanovana horonantsary sy effets mobile ho an'ny iPhone izay amoronan'ny mpampiasa sy fizarany horonantsary mifangaro amin'ny effets visuels avo lenta. Manome hery ireo mpampiasa tsy manana fahaiza-manao fanovana i Cinefy hametahana haingana ireo rakitsary, manampy mozika ary hampihatra ireo vokany mahavariana amin'ny alàlan'ny interface interface intuitive sy tsotra.
"Nataonay Cinefy hametraka mivantana ireo fitaovana famokarana kalitao mahafinaritra indrindra eo an-tanan'ny mpampiasa," hoy i Dan Hellerman, CEO an'ny App Creation Network. "Ny fahafahan'ny studio mampiroborobo ny marika misy azy ireo, amin'ny alàlan'ny fanomezan-danja ny mpampiasa ny singa misy ny seho na ny lalao, dia fitaovana marketing mipoaka."
Ao Cinefy, misy fonosana misy valiny misy marika misy marika manokana na misy marika amin'ny rindranasa fampiharana, manome ny fahitalavitra sy ny studio lalao ny fahafaha-mivarotra fananana vaovao amin'ny fomba izay miteraka fironana mahavariana sy fahafaha-miteraka virus be.
Mozika Sariaka dia niara-niasa tamin'ny Chairseven sy ny App Creation Network hanome an'i Cinefy fidirana amin'ny katalaoginy feno momba ireo hira voadio tamin'ny zon'ny mpamorona natao hamoronana feon-kira tonga lafatra, azo alaina amin'ny alàlan'ny fahazoan-dàlana tokana misy an'i Cinefy. Friendly Music no fanangonana mozika voalohany natao ho an'ny atiny novokarin'ny mpampiasa, manolotra mozika voadio ara-dalàna sy ara-dalàna 100% ho an'ny famoronana haino aman-jery an-tserasera sy manokana.
Namboarina ho fiaraha-monina i Cinefy manondrana mivantana any amin'ny Facebook, Youtube ary Vimeo. Ho fanampin'izany, ny mpampiasa dia afaka mamonjy rakitra rakitra maromaro ary manondrana amin'ny horonan-tsarin'ny fakantsariny. Amin'ny ho avy, Cinefy dia ho azo ampiasaina amin'ny fitaovana iPad sy Android, ary hahafahan'ny mpampiasa miditra amin'ny vokany navoakan'izy ireo amin'ny fitaovana rehetra.
Ny teknolojia famoahana fototr'i Cinefy dia misy amin'ny fahazoan-dàlana marika fotsy ho an'ireo mpanjifa orinasa mitady hanangana sy hampiroborobo ny sehatra famoahana horonantsary manokana. Ho an'ny studio na mpanentana, ny fonosana effets Cinefy dia mety misy eo anelanelan'ny 10-15 marika sary na sary mihetsika, ary azo zaraina ho alaina maimaimpoana na karama. Ny fonosan'ny effets dia azo noforonina mba hahitana singa mpanohana ny antoko fahatelo hampiroborobo ny fampielezan-kevitra mandritra ny fotoana fohy na ny fifaninanana horonantsary novokarin'ny mpampiasa.
Tags: cinefyfanovanaiPhonefampiharana iphonesarimihetsikafanovana sarimihetsika
29 Nov 2011 tamin'ny 2:26 PM
IZAO no hoavin'ny asa fanaovan-gazety, fanaovana sarimihetsika, fanehoan-kevitra ary iza no mahalala inona koa. Mpanova lalao tanteraka. Misaotra nizara 🙂
29 Nov 2011 tamin'ny 4:59 PM
Tsy azo antoka fa nisy nahita ny andro ananantsika fahefana lehibe!
29 Nov 2011 tamin'ny 6:12 PM
Tena ankafizinay ilay lahatsoratra, sy ny teny soa avy amin'i Doug sy Zoomerang. Mino tanteraka izahay fa ity ny hoavin'ny horonantsary sosialy. Heverinay fa ny taona 2012 dia ho taonan'ny haino aman-jery sosialy misy marika, ary manantena izahay fa afaka manampy amin'ny fitantanana ny fiampangana i Cinefy!
29 Nov 2011 tamin'ny 8:54 PM
Mahafinaritra! Mbola tsy nanandrana an'ity aho, fa toa fomba tsara hisamborana feo avo lenta kokoa miaraka amin'ny horonan-tsarinao (ary hanome anao fitoniana bebe kokoa) http://www.amazon.com/Fostex-Audio-Interface-Iphone-AR-4I/dp/B005DNAB12
29 Nov 2011 tamin'ny 9:10 PM
Toa iray heck amin'ny fametrahana! Tsikaritro fa ny olon-kafa koa dia mivarotra lantom-peo avo lenta izay miakatra amin'ny iPhone ihany koa. Zavatra adala!